China Okunye Material ifektri kanye nabaphakeli | Ukuzalwa kabusha
Igama lomkhiqizo CAS NO. Isicelo se-Crosslinking agent Hyper-Methylated Amino Resin DB303 - Izithuthi ziqedile ； Izindwangu zesitsha, Izinsimbi ezijwayelekile ziyaqedwa
Igama lomkhiqizo CAS NO. Isicelo
I-Hyper-Methylated Amino Resin DB303 - Ukuqedwa kwezimoto, ukumbozwa kwesiqukathi, izinsimbi ezijwayelekile kuqeda, ukuqeda okuqinile okuphezulu ishes Ukuqedwa kokuthwalwa ngamanzi ； ukumbozwa kwekhoyili.
I-Pentaerythritol-tris- (ß-N-aziridinyl) propionate 57116-45-7 Thuthukisa ukunamathela kwe-lacquer ezingxenyeni ezihlukile, thuthukisa ukumelana kokukhuhla amanzi, ukugqwala kwamakhemikhali, ukumelana nokushisa okuphezulu nokumelana kokuphikisana kobuso bopende
I-Isocyanate Crosslinker evinjiwe KL-120 Ayinazo izidingo eziqinile zezakhiwo ze-ionic zokumbozwa ngamanzi futhi ingasetshenziswa ezinhlelweni ze-anionic noma ze-cationic noma ezinhlelweni ezingezona ze-ionic.
Umenzeli Wetting OT 75 I-OT 75 iyinhlangano enamandla yokumanzisa i-anionic ngokumanzisa okuhle kakhulu, ukuxubusha nokwenza isenzo sokumisa kanye nekhono lokwehlisa ukungezwani kwangaphakathi.
I-Ethylene glycol tertiary butyl ether (ETB) 111-76-2. Okuhlukile okuhlukile kwe-ethylene glycol butyl ether, ngokuhlukile, iphunga eliphansi kakhulu, ubuthi obuphansi, ukusebenza kabusha okuphansi kwamakhemikhali, njll.
I-ethylene glycol diacetate （EGDA） 111-55-7 Ngokwengxenye noma ngokuphelele ukufaka esikhundleni seCcylohexanone, i-CAC, i-Isophorone, i-PMA, i-BCS, i-DBE njll, ngezici zokwenza ngcono ukuhleleka, ukulungisa ijubane lokomisa.
I-Propylene glycol diacetate (PGDA) 623-84-7 Njengoba kuphela for resin alkyd, acrylic resin, polyester resin, nitrocellulose resin, uviniga chloride resin, PU elapha ejenti
I-Propylene Glycol Phenyl Ether (PPH) 6180-61-6 Izici ezingezona ezinobuthi nezobungani bemvelo ukunciphisa umphumela wepende we-VoC kuyamangalisa. Njengoba i-coalescent esebenza kahle i-emulsion yamanzi nokusabalalisa okufakwe ngopende ocwebezelayo nophenyo lusebenza ngokukhethekile.
Langaphambilini I-Optical Brightener OB
Olandelayo: I-Isocyanate Crosslinker evinjiwe KL-120